Indlu iimitha ezingama-50 ukusuka elunxwemeni lwaseTorre Chia
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguSalvatore
USalvatore unezimvo eziyi-31 zezinye iindawo.
Inxalenye yevilla enobubele kusapho kwinqanaba elinye kumgangatho ophantsi, kunye negadi. Igumbi elinamagumbi amathathu abantu abayi-4/5 libandakanya: igumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokulala elineebhedi ezi-2 ezingatshatanga (ezidibeneyo), igumbi lokuhlambela labucala elineshawa, igumbi lokuhlala elinekhitshi kunye nebhedi yesofa enye. Izixhobo: iTV yesathelayithi, umatshini wokuhlamba, umoya womoya, i-oven yombane, inethi zeengcongconi, ivaranda enezixhobo, ibarbecue yezitena, ishawari yangaphandle, indawo yokugcina amanzi, indawo yokupaka.
indlu ibekwe kwindawo yabucala, nje 50 m ukusuka elunxwemeni Torre Chia, ebekwe emazantsi enqaba homonymous. Indlu igqitywe ngononophelo olukhulu, inefenitshala yale mihla, ikhululekile kwaye inomoya wokubuk’ iindwendwe. Ukutya kwipatio kukuvumela ukuba wonwabele impepho epholileyo yolwandle.
Indlu ikwipropathi yabucala, ebekwe emazantsi ePisan Tower. indlu yenzelwe ukwenza ukuhlala kweendwendwe kube mnandi. Zonke iinkonzo zifikeleleka lula ngeenyawo.
Ekungeneni, iindwendwe ziya kubingelelwa ngabanini okanye abameli babo abaya kubanika lonke ulwazi oluyimfuneko ukuze bahlale kamnandi. Kufuphi nendawo yokuhlala, imivalo, iipizza kunye neendawo zokutyela zikumgama olula wokuhamba. ekubeni ipropati ingekho ngexesha lokuhlala, isebenzisa abantu basekuhlaleni abathembekileyo, kodwa nakweyiphi na imeko iya kuba nako ukufikelela kwindlu ngeeyure ezimbalwa xa kuyimfuneko.
Ekungeneni, iindwendwe ziya kubingelelwa ngabanini okanye abameli babo abaya kubanika lonke ulwazi oluyimfuneko ukuze bahlale kamnandi. Kufuphi nendawo yokuhlala, imivalo, iipizza…